यी हुन् विदेशी भूमिमा लुक्ने नेपाली कलाकार : व्यापारमा जम्नेदेखि भाँडा माझ्नेसम्मका काम ! | Diyopost - ओझेलको खबर यी हुन् विदेशी भूमिमा लुक्ने नेपाली कलाकार : व्यापारमा जम्नेदेखि भाँडा माझ्नेसम्मका काम ! | Diyopost - ओझेलको खबर
यी हुन् विदेशी भूमिमा लुक्ने नेपाली कलाकार : व्यापारमा जम्नेदेखि भाँडा माझ्नेसम्मका काम !
मंगलबार, आश्विन ०५, २०७८ | १९:५४:५२
हरेक मान्छे एउटा सपना देखेर बाँचेकाे हुन्छ । कलाकार तथा सेलिब्रेटीकाे जीवन शैली र उनीहरु नायकत्व देखेर कुनै समय हरेक किशाेर किशाेरी कलाकार बन्ने सपना देख्थे । चलचित्रकाे हिराे बन्नु एउटा मान्छेका लागि भयानक सपना हुन्थ्याे । तर, आम मान्छेले आफ्नो भविष्यको चित्रमा सजाएको एक समयका चर्चित कलाकारहरुको अनुहार भने यो मुलुकमा देख्न नपाइने भएको छ । उनीहरु कलाकारीतालाई माध्यम बनाएर विदेश पलायन भएका छन् ।
उसो त, नेपाली फिल्म क्षेत्रको व्यापार मात्रै होइन गुणस्तर पनि खस्किरहेको छ । यहाँ पारिश्रमिकको पिरलो अर्थात् वाहियात कलाकारलाई महँगो मूल्य र राम्रा निर्देशकलाई बजेटको अभाव छँदै छ । प्रमुख चरित्र निर्माण (हिरो) आर्य-खर्स जातिमै अड्किरहेको पनि छँदै छ । आदिवासी-जनजाति-सिमान्त्कृत एवं ऐतिहासिक सवालमा करिब फिल्म निर्माण नै हुन् सकेको छैन । यावत विसङ्गतिबीच कालाकारहरूको विदेश पलायन एउटा ठूलाे समस्या हो । द्वन्दकालको समयदेखि झाँगिएको कलाकारहरूको विदेश पलायन शिलशिला कोरोनापश्चात् झन् बढेको छ ।
उसो त, नेपाली कलाकारिता क्षेत्रका तमाम राम्रा पक्षहरू नभएका पनि होइनन् तर अश्लीलता, आपसी झैँ–झगडा र विदेश पलायन- नेपाली कलाकारिता क्षेत्रको विशेषता बनिसकेको छ ।
नेपाली कलाकारिताको व्याकरणमा विदेश पलायन प्रमुख हिज्जे किन बनिरहेको छ ? कलाकारका रूपमा पाइला टेकेपछि सुटुक्क अमेरिका लगायत देशका भिसा ‘ट्राई’ गर्नेहरूको सूची बढ्नुको कारण के हो ? सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि विदेश छिर्ने र उतै बेपत्ता हुने सिलसिला किन रोकिन सकेन ? विदेश पुगेका कलाकारहरू यसबारे बोल्नै चाहँदैनन् । नेपालमै बसेर कलाकारिता गर्नेहरू ‘यो प्रश्न नसोधीदिए हुनेथियो’ झैँ गर्छन् ।
विदेशमा गुमनाम हुने अधिकांश नेपाली कलाकारहरू अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित देश मात्र होइन, खाडी मुलुकमा समेत पलायन भएका छन् । नायक, नायिका, गायक, गायिका, सङ्गीतकार, रचनाकार, निर्देशक, निर्माता, मोडल, चरित्र अभिनेता, अभिनेत्री आदि सबै विदेशमा छन्। विदेश पुग्ने दाउपेचमा छन् या, विदेशलाई आफ्नो भविष्य बताइरहेका छन् । विदेश पलायन भएका कलाकारहरूको लम्बेतान सूचीले यस कुरालाई स्पष्ट गरिसकेको छ ।
विशेष गरेर अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, लण्डन, युरोपका देशहरूमा पलायन हुन चाहने कलाकारहरूको दौडधुपले कलाक्षेत्रलाई बद्नाम गराएको टिप्पणी भैरहेका छन् । ती देशहरूले भिषा दिनका लागि सबैभन्दा बलियो प्रमाण पत्रपत्रिका, अनलाइन, युट्युबमा आएका समाचारहरूलाई मान्ने गरेपछि पत्रपत्रिका र अनलाइनमा समाचार छपाएर विदेश छिर्न खोज्ने कलाकारहरूको लामै सूची छ । त्यति मात्रै होइन पत्रपत्रिकाको समाचारको कटिङ देखाएर सैयौँ कलाकारहरू विदेश पलायन भएका छन् । नेपालमा सानोतिनो काम गर्न लाज मान्ने ती कलाकारहरू अमेरिका, युरोपसहितका देशमा पलायन भएर ‘क्लिनर’को काम गर्ने गरेको धेरैले बताउँछन् । नेपाललाई गाली गर्ने ती ढोँगी कलाकारहरूले अमेरिका, युरोप लगायतका देश प्रवेश गर्नेवित्तिकै राष्ट्र प्रेमका ठूलाठूला गफ पनि दिने गर्छन् ।
को-को कहाँ-कहाँ छन् ?
अस्ट्रेलियामा : गायिका मञ्जु पौडेल, गायिका प्रकृति श्रेष्ठ, गायक ईश्वर पोखरेल, समीर आचार्य, सञ्जीव पराजुली, सुजात उपाध्याय, नरेन कुलुङग, दिल तामाङ, किरण भण्डारी, उज्ज्वल केसी, राजेश केसी, सरुन ताम्राकार, दिव्य सुब्बा, विवश पौडेल, राजकुमार गोस्वामी, विश्वास श्रेष्ठ, आवुन पाण्डे, विकास उप्रेती ।
अमेरिकामा : दिलीप रायमाझी, जीवन लुइँटेल, राजबल्लभ कोइराला, प्रशन्न पौडेल, जल शाह, नीरज बराल, मुकेश ढकाल, विक्रान्त बस्नेत, ऋचा घिमिरे, सुरेश दर्पण पोखरेल, शङ्कर घिमिरे, नन्दिता केसी, रञ्जना शर्मा, विमलेश अधिकारी, सुमन गैरे, राजेश नाथ, श्याम भट्टराई, अरुणिमा लम्साल, विधान कार्की, निशा सुनार, हिमग्याप लामा, सुजाता कोइराला, उषा पौडेल, विनीता वराल, भगवान् भण्डारी, नरेन्द्र प्यासी, प्रेमराजा महत, सुवास थापा ।
क्यानडामा : गायक बुद्धिसागर बस्याल, फिल्म कलाकार पुष्कर भट्ट, हिम्मतवाली कलाकार सुदर्शन गौतम, मोडल तथा डान्सर रोशन केसी, ईश्वर थापा, फिल्म निर्देशक हरि सिवाकोटी । (कलाकारहरुको पूर्णसूची भने यो होइन ।)
प्लस–टु सकिएका विद्यार्थीहरू अध्ययनका नाममा विदेश जाने गरेजस्तै राम्रा सम्भावना बोकेको नेपाली कलाकारहरू एक–दुई फिल्म गरेलगतै गुमनाम भइरहेका छन् । त्यसरी गुमनाम भएका कलाकारहरूमध्ये कति अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित ज्याक्सन हाइटमा भेटिने गरेका छन् । कोही बेलायतको प्लमस्टेटहरुमा देखिने गरेका छन् । कोही कोही जापानको टोकियोस्थित इलेकट्रोनिक्स कम्पनीहरूमा हाइ एसीकाबीच काम गरिरहेको छन् । कोही भारतमा त कोही क्यानडा, कोही नेदरल्यान्ड त कोही बेल्जियम जस्ता मुलुकमा ‘हाउसवाइफ’ बनेर बस्ने गरेका छन् । र, कोही निम्न आयस्रोतमै खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका भेटिने गरेका छन् ।
नायक सरोज खनाल र नायिका कृष्टि मैनाली विदेश पलायन हुने कलाकारको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा पर्दछन् । उनीहरू आजभन्दा करिब २ दशकअगाडि अमेरिका पुगेका थिए ।
त्यसो त, बिदेसिन चाहने धेरै कलाकारको पहिलो नजरमा अमेरिका पर्ने गर्छ । कोही डिभी परेर त कोही साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि भिजिट भिसामा जाँदा उतै बस्ने गरेका छन् ।
नेपालमा अभिनयमा राम्रै जमेका र मनग्य आम्दानी गरिरहेका कलाकर्मी पनि अमेरिकामै ‘सेटल’ हुने दाउमा रहेको पाइन्छ । कतिपय कलाकार भने अमेरिकामा बसाइँ सरिसकेका छन् । कतिपय नाम चलेका अभिनेता, अभिनेत्री पनि भिसा नपाएर टेन्सनमा छन् । अमेरिका उड्ने र उतै घरजम गरेर बस्ने अनि नेपाल आउँदा ठुल्ठूला गफ हाँक्नेहरू पनि कमी छैनन् ।
अलिअलि नाम चलेका कलाकारले ठुला मुलुक रोजे पनि केही कलाकार खाडी मुलुक जाने पनि उत्तिकै छन् । भर्खर करिअर सुरु गरेका कतिपय कलाकारहरू मलेसिया, दुबई, साउदी तथा कतारसमेत भासिएका छन् ।
युरोपेली देशहरू, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, भारत लगायतका देशहरूमा पलायन भएका कलाकारहरूको सूची निकै लामो छ । कृष्टि मैनाली, ऋचा घिमिरे, रञ्जना शर्मा, अरुणिमा लम्साल, सुधांशु जोशी, उषा पौडेल, रुपा राना, पूजा चन्द, सारंगा श्रेष्ठ, दिलीप रायमाझी, राजवल्लभ कोइराला, जीवन लुइँटेल, बन्नी प्रधान, गणेश उप्रेतीहरु यसअघि नै अमेरिका सेटल भइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय ख्याति कमाएका लोकप्रिय गायक सूर्य खड्का , गायक अमित सापकोटा, खेमराज पौडेल, चेतन घर्तिमगर र भावना आचार्य लगायत जापानमा सेटेल भइसकेका छन् । क्यानडामा गायक बुद्धिसागर बस्याल, कुबेतमा लोक तथा पप गायक डिबी लोप्चन लगायतको सेटलमेन्ट भइसकेको छ ।
नायक सरोज खनाल:
खनाल अभिनीत जन्मजन्म, दुस्मन, चुनौती, परिभाषा, पुकार, सान्नानी, सारंगी, प्रेमपिण्ड, मनकामनाजस्ता फिल्मले पैसा र प्रशंसा दुवै बटुले । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको टेलिफिल्म भीडदेखि भीडसम्मले पनि लोकप्रियता हासिल गरेको थियो । व्यावसायिक सफलता भरपुर थियो तर उनी नेपालमा अड्न सकेनन् । १७ वर्षे आफ्नो अमेरिका बसाई छाडेर केही अघि नेपाल आइपुगे तर कोरोना सुरु भयो । कोरोना सुरुभएसँगै अमेरिकाले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन थाल्यो । अमेरिकाका नागरिकताधारी नागरिक खनाल (बसोबास: भर्जिनिया) महामारीकै कहरबीच अमेरिका उडे । नेपाल किन बसीरहन्थे ?
लोकगायक प्रेमराजा महत:
चर्चित लोकगायक प्रेमराजा महतका गीत युट्युबमा अहिलेको पुस्ताले उत्तिकै रुचाउँछ । उनले गाएका सिमसिमे पानीमा, बाँझो खेतमा जस्ता लोकगीत उत्तिकै लोकप्रिय छन् । लोकगीतको सुरुवाती मौसमलाई हराभरा बनाउन काँध थापेका यी गायक खुसुक्क अमेरिका (बसाइ: बाल्टिमोर) छिरे । उनले केही वर्षदेखि बाल्टिमोर मेरिल्याण्डमा नेपाल हाउस नामक नेपाली रेष्टुराँ पनि चलाइरहेका छन् । अहिले उनै उतै रमाइरहेका छन् । सम्भवतः उनको अबको नेपाल बसाइ भ्रमणका लागि मात्रै हुनसक्छ ।
“खासमा बस्ने भनेर आएको थिइनँ । तर, यता बस्ने वातावरण भएपछि मैले सोचें, संसार विश्वग्राम, ग्लोवल भिलेज हो । अब नेपालमा पनि गर्ने, यहाँ पनि गर्ने”, अमेरिका बसेर आक्कलझुक्कल गीत गाइरहेका उनी उता पुगेर पनि आफ्नो सृजना नमरेको दाबी गर्छन, तर उनको सक्रियता त्यतिसाह्रो देखिएको छैन ।
अभिनेता सुवास थापा:
त्यस्तै, फिल्ममा देशप्रेमको खोजी गर्ने अभिनेता सुवास थापा पनि लामो समयदेखि अमेरिकामै छन् । उनको फिल्म ‘बिर्खेलाई चिन्छस्’ ले धेरथोर उनलाई ‘बिर्खे’ का रूपमा चिनारी त दियो, तर उनले अर्को पात्रको जन्म दिएनन्- फिल्मका लागि । बरु उनी अमेरिकातिरको बाटो रोजे । तथास्तु, भिजिलान्ते, फेसबुक, सरि ल, को आफ्नो लगायत फिल्मबाट परिचय बनाएका उनी श्रीमतीसहित उतै रमाए। उनी नेपाल आएको खासै सुनिएको छैन ।
निर्देशक प्रसन्न पौडेल:
प्रसन्न पौडेललाई म्युजिक भिडियो निर्देशनमा भ्याइनभ्याई थियो । चलचित्र ‘स्वर’का निर्देशक पौडेलको निर्देशनमा म्युजिक भिडियोे बनाउन कतिपयले महिनौँ पर्खन्थे । खासमा उनीसँग काम गरेर चर्चामा आउन चाहन्थे कलाकारहरू । नाम, दाम र कामको सबै थियो उनीसँग । तर, करिब २ वर्षअघि साउथ एसियन फिल्म फेस्टिभलमा ‘होक्से’ फिल्म देखाउन र मिस नेपाल युएसको निर्णायकका लागि भन्दै अमेरिका उडेका पौडेल उतै हराए ।
अभिनेता सुशांक मैनाली:
चलचित्र ‘साँघुरो’ हेरिसकेपछि अभिनेता सुशांक मैनालीले अभिनयमार्फत राम्रै तारिफ कमाए । सामान्य कथामा निर्माण भएको यो फिल्ममा उनको भूमिकाले फिल्मलाई न्याय दियो भन्दै चर्चा भयो । तर उनले अभिनय गरेका अन्य फिल्मले भने ‘साँघुरो’ ले जस्तो चर्चा दिन सकेनन् । उतिबेलै अमेरिका भासिएका सशांक लामो समय भइसक्दा पनि नेपाल फर्केका छैनन् ।
कुनै समयका चर्चित अभिनेता मुकेश ढकाल, सुरेश दर्पण पोखरेल, शङ्कर घिमिरे लगायतका कलाकारले पनि विदेशी माटोमै आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् ।
नायिकाहरूको सवालमा अझ बेसी देखियो !
पहिलो रङ्गिन चलचित्र कुमारीकी अभिनेत्री चैत्यदेवीले विदेशी युवकसँग विवाह गरेपछि नेपाली अभिनेत्रीको विदेशमा बस्ने नेपाली वा विदेशीसँग विवाह हुने क्रमले बढोत्तरी पाएको हो । अभिनेत्रीहरूमा एकछत्र राज गरेका अघिल्लो पुस्ताका कलाकारमध्ये धेरै कलाकार विदेशी भूमिमै आफूलाई स्थापित गरेका छन् । तर, ती कलाकारले विदेशी सिनेमा उद्योगमा आफूलाई अटाउन सकेका छैनन् ।
नायिका ऋचा घिमिरे, युना उप्रेती, सौजन्य सुब्बा, अरुणिमा लम्साल, नन्दिता केसी, जल शाह, रञ्जना शर्मा लगायतका कैयन् अभिनेत्री एकसाथ फिल्म क्षेत्रमा जमेका चर्चित कलाकारमा गनिन्छन् । तर सबै कलाकार अहिले फिल्म क्षेत्रबाट टाढा भएका छन् । र, आफ्नो नयाँ जीवनको ‘सेटलमेन्ट’ मा लागिपरेका छन् । ‘स्टेज क्विन’ उपनामले चर्चित गायिका मञ्जु पौडेल अष्ट्रेलीयाको रेसिडेन्ट कार्ड बनाएर उतै बसेकी छिन् ।
यसैगरी, कृष्टि मैनाली अमेरिका भासिएको वर्षौँ भइसकेको छ । सारंगा श्रेष्ठ पनि यतिबेला सन्तान जन्माएर अमेरिकामा नै छिन् भने अर्की अभिनेत्री जल शाह पनि विवाह गरेर अमेरिकामा नै भासिएकी छिन् । अर्की नायिका सज्जा मैनालीको पनि अमेरिका (पेनसल्भिनिया) मा बस्ने सपना अन्ततः विवाहले नै पुर्‍याइदिएको छ । युना उप्रेती, रेजिना उप्रेती लगायत पनि आफ्ना अग्रजहरूको बाटो पछ्याएर विदेशमा रहने नेपाली युवककी दुलही बनिसकेका छन् । ऋचा सिंह ठकुरी अस्ट्रेलिया छिन् ।
अमेरिकाको बाल्टिमोरमा व्यवसाय चलाउदै आएकी अर्की अभिनेतृ हुन्–पूजा परियार चन्द (हाल : लामा) । नेपाली कला क्षेत्रमा लामो समय बिताएकी पूजा लामो समयदेखि अमेरिकामा छिन् । सारंगा श्रेष्ठ, ऋचा घिमिरे, अरुणिमा लम्साल आदि अभिनेतृ पनि बाल्टिमोरमै बस्छन् ।
यसैगरी, सज्जा मैनाली, पूजा चन्द, अरुणिमा लम्साल (अमेरिका), पार्वती अधिकारी, मौसमी मल्ल (बेल्जियम), चैत्यदेवी (जापान) मा छन् । यता, गायिका कोमल वलीले पनि धेरैपटक अमेरिका जान एप्लाई गरिन् । तर, अमेरिकन दूतावासले भिसा दिएन ।
कुनै समय थियो हरेकजसो नेपाली चलचित्रमा अभिनेतृ निरुता सिंह र विपना थापा हाराहारीमा देखिन्थे । अभिनयमा राम्रो दख्खल राख्ने दुबै अभिनेतृले राम्रा प्रशंसक कमाएका थिए । यद्यपि अहिले यी दुवै अभिनेतृ नेपाली सिने नगरीबाट टाढा छन् ।
नायिका कृष्टि मैनाली :
अभिनेत्री कृष्टि मैनालीले सन् १९८५ मा ‘के घर के डेरा’बाट नेपाली चलचित्रमा डेब्यु गरेकी थिइन्। तिलहरी, चिनो, युगदेखि युगसम्म, राधाकृष्ण लगायतका चलचित्रसँगै उनले यस उद्योगमा दशक लामो यात्रा तय गरिन्।
एक समय चर्चामा रहेकी नायिका मैनाली हाल न्युयोर्कमा बसोबास गर्छिन् । अमेरिकामा रहेका केही नायिकाको नेपाल आउने–जाने क्रमले संचारमाध्यममा स्थान पाए पनि कृष्टिको भने खासै पाइदैन ।
नायिका बिपना थापा :
जन्मभूमि’ बाट चलचित्रमा प्रवेश गरेकी उनका ‘अप्सरा’, ‘गाजल’, ‘मितिनी’ सहितका चर्चित चलचित्र हुन् । चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो काम गर्दागर्दै अभिनेतृ विपना थापाले भारतीय नागरिक डा.आशुतोष भारद्वाजसँग लगनगाँठो कसिन् र घरव्यवहार सम्हाल्न त्यतै बसाइ सरिन् । अभिनेत्री बिपना थापाको विवाह भारतीय नागरिकसँग भएको छ ।
भारतको मथुरा निवासी आशुतोष भारद्वाजसँग बिपनाको लगनगाँठो कसिएको हो। २०६३ सालमामा विवाह गरेर भारत छिरेकी बिपना अहिले कुशल गृहिणीको रूपमा सिमित हुँदै भारतको मथुरामै बसोबास गरिरहेकी छिन् ।
नायिका निरुता सिंह:
सन् १९९३ मा निर्देशक तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेको चलचित्र ‘दक्षिणा’ बाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी निरुता पनि अहिले नेपाली सिने नगरीसँग मात्र होइन नेपालबाटै बेखबरजस्तै छिन् । मनमन्दिर, दर्पण छाया, बन्धकी, दुई किनारा, दु:ख, आमाको काख, आफन्त, माइती, माइली, सन्तान थरीथरीका, लहना आदि दुई दर्जन बढी चलचित्रमा अभिनय गरेकी निरुता यतिबेला भारतमै छिन् ।
सुन्दर र भलादमी नायिकाको उपमा पाएकी निरुता सिंह मुम्बईमा इन्टेरियर डिजाइनको काममा व्यस्त भएको बताइन्छ ।
नायिका गरिमा पन्त :
सोझी नायिकाको छवि बनाएकी अभिनेतृ गरिमा पन्त अहिले बेल्जियममा व्यापार गरेर बसेकी छिन् । ‘झोला’, ‘तीनघुम्ती’ जस्ता ऐतिहासिक चलचित्रमा अभिनय गरेर गम्भीर प्रकृतिका दर्शकको प्रशंसा कमाएकी गरिमा एक एनआरएनसँग लगनगाँठो कसेपछि बेल्जियम पुगेकी हुन् ।
नायिका जल शाह :
कुनै समय जल शाह समकालीन अभिनेतृहरूमा अग्रणी मानिन्थिन् । लोकप्रिय यी नायिकाले पनि आफूलाई नेपालमा टिकाउन सकिनन् । उनी अमेरिकाको साल्ट लेक सिटीमा बस्दै आएकी छिन् । करिब १० वर्ष युटामा बसेकी जल शाह अमेरिकाका लागि पनि पुरानी भैसकेकी छिन् ।
नायिका युना उप्रेती :
चलचित्र ‘पर्खि बसें’को अभिनयमार्फत चर्चामा आएकी अभिनेतृ युना उप्रेतीका रहरलाई पनि नेपाली कला क्षेत्रले जोगाउन सकेन । आधा दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरेपछि अमेरिका पसेकी युनाले उतै बसोबास गर्ने विकास अधिकारीसँग घरजम गरिन् ।
नायिका निष्ठा शाह:
अभिनयसँगै संचार क्षेत्रमा पनि आफ्नो समय खर्चिएकी निष्ठा शाहले नेपाली कला क्षेत्रलाई निरन्तरता दिन सकिनन् । एक समयको चर्चित कार्यक्रम ‘गिताञ्जली’की संचालिका निष्ठा हाल बोस्टन राज्यकी बासिन्दा भएकी छिन् ।
नायिका सिम्पल खनाल :
मोडलिङबाट चर्चा कमाएकी नायिका सिम्पल खनालले म्युजिक भिडियो निर्देशक प्रशन्न पौड्यालसँग लगनगाँठो कसेकी थिइन्। पहिलो घरजममा जम्न सके,न पौड्यालसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिन् । त्यसपछि, उनले दोस्रो विवाह विवाह बेलायत बसोबास गर्ने पाकिस्तानी मूलका व्यवसायी नदिनसँग गरिन् । बेलायत नै बसाई सरिन् ।
नायिका हर्षिका श्रेष्ठ :
मोडलिङ हुँदै अभिनयमा आएकी नायिका हर्षिका श्रेष्ठले पनि भारतलाई घर र नेपाललाई माइती बनाइन् । उनको विवाह भारतीय व्यापारी प्रसुन झुनझुनवालासँग भएको छ । हर्षिका र झुनझुनवालाले २०७२ सालमा प्रेमविवाह गरेका हुन् । व्यवसायी प्रसुनको कलकत्तामा स्थायी बासिन्दा हुन् । यही कारण विवाहपछि हर्षिका कलकत्तामै बस्दै आएकी छिन्।
नायिका अनुपमा कोइराला:
केही चलचित्रमा अभिनय गरेर राम्रै पहिचान बनाएकी अभिनेतृ अनुपमा कोइरालालाई पनि अमेरिकाले तान्यो । अमेरिका छिरेपछि कोइरालाले पनि स्वदेश फर्कने खासै मन गरिनन् । उनी भर्जिनिया राज्यमा आफ्ना निर्देशक श्रीमान् अनिश कोइरालाका साथ छिन् ।
पुराना नायिकाहरूको विदेश पलायनको संकेत ?
लामो संघर्ष गरेर बनाएको नाम र पहिचान सम्पूर्ण रूपमा गुमाएर विदेशमा शून्यबाट संघर्ष गर्न किन तयार छन् नेपाली नायिकाहरू ? विविध प्रविधि भित्रिसक्दा पनि नेपाली सिने उद्योग सोचेजति व्यवसायिक हुन नसक्नुले नायिकाहरूलाई विदेशतिर धकेलिरहेको हो ? अन्य उद्योग जस्तै सिने उद्योगमा पनि समान कामको समान पारिश्रमिक नपाएर उनीहरू विदेशिएका हुन् ? पारिवारिक बन्धन, फिल्मले चर्चा नपाउनु, स्थापित हुन नसक्नु आदि कारणले महिला कलाकारहरू हराउने क्रम बढ्दै गएको हो? यदि त्यसो हो भने पुराना नायिकाहरू विदेश पलायन हुनासाथ घर गृहस्थीमै किन भुलीरहेका छन् ?
नेपाली चलचित्र उद्योगमा यसरी नब्बेको दशकमा आएका अभिनेत्रीहरू नै ओझेल परिरहेका छन्। तर छिमेकी भारतको बलिउड जगत (मनिषा कोइराला, हेमा मालिनी, रेखा) लाई हेर्दा भने त्यस्तो देखिँदैन। पुराना नायिकाहरू गुमनामीको कारण के हो ? राजेश हमाल, भुवन केसीहरू अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा चर्चामै छन्। तर, उनीहरूभन्दा निकै पछि रंग दुनियाँमा छिरेर चर्चा कमाएका अभिनेत्रीहरू दृश्यबाट ओझेल पर्नुको कारण के हो ? नेपाली चलचित्रका नायिकाहरूको सुमधुर अभिनय यात्रा उमेर र शारिरिक सौन्दर्यमा मात्रै सिमित रहिरहँदा यस्तो भएको त होइन ?
अभिनेत्रीहरूलाई निरन्तरता दिन नसक्नुको दोष चलचित्रकर्मी तथा समिक्षक प्रकाश सायमी निर्देशक र अभिनेत्रीलाई नै दिन्छन्। “आफ्नो समयमा चलचित्र उद्योग धानेका अभिनेत्री जस्तो पायो त्यस्तो चलचित्रमा कमब्याक गर्नु नै मुर्खता हो। उनीहरूले चलचित्र पहिचान गर्न सकेनन्। वर्षौंको अनुभव सँगालेका निर्देशकले पनि गतिला चलचित्र निर्माण गर्न सकेनन्”, सायमी भन्छन्।
निर्देशक आकाश अधिकारी र यादव भट्टराई दुवैले भने कथा लेखनमा कमजोरी देख्छन्। तर सायमी यसलाई उनीहरूको पन्छिने बहाना मात्र ठान्छन्। भन्छन्, “राम्रा स्क्रिप्ट हातमा लिएर बसेका लेखकहरू छन्, तर निर्देशकले आँट नै गर्न सक्दैनन्।”
राम्रो निर्देशकको हातमा फिल्म पुग्यो भने सफल त हुन्छ नै अभिनेता, अभिनेत्रीको करिअर पनि लम्बिन्छ। “तर यहाँ निर्देशकले नै अभिनेत्रीको करिअरको आयु आठ दश वर्ष भन्दा लामो देखेको हुँदैन”, सायमीको आरोप छ, “हिरोइन हुनु भनेको लोकसेवा आयोगको जाँच दिनु होइन, जसमा उमेरको हद तोकिएको होस्।” विश्व साँघुरो बन्दै जाँदा जनमानसको चलचित्रप्रतिको अवधारणा पनि फेरिँदै गएको छ। सायमी भन्छन्, “अब गीत गाउन र नाच्न जान्दैमा नायिका भइँदैन, जीवन जिउनु नायिका हुनु हो।”
चलचित्रमा महिला कलाकारहरूले निरन्तरता दिन नसक्नु व्यक्तिगत जीवनदेखि व्यावसायिक कारणसम्म रहेको बताउँछिन्, मिथिला शर्मा । लामो समयदेखि चलचित्रमा अभिनय गरेकी उनी भन्छिन्, ‘महिलाहरूले व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक कारणले चलचित्रमा निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।’ तर, पुराना नायिकाहरू चलचित्रमा नखेल्दैमा उनीहरूको योगदान भने भुल्न नहुने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार योगदान दिएका कलाकारलाई हराए, गुमनाम भएको भन्न मिल्दैन । उनी भन्छिन्, ‘पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण पनि महिलाहरू चलचित्रबाट टाढा भएका छन्, त्यसकारण योगदान दिएका कलाकारलाई चलचित्रले बिर्सनुहुँदैन ।’ कोही कलाकार भने नबुझी चलचित्र क्षेत्रमा आएका कारण आउने/हराउने हुने गरेको उनी बताउँछिन् । उनका अनुसार एउटा चलचित्र खेलेर चलचित्र क्षेत्र छोड्नेहरू पनि धेरै छन् । नबुझी चलचित्र क्षेत्र प्रवेश गर्ने, आर्थिक निर्वाह गर्न नसक्नुका कारणले आएर हराउनेहरू पनि छन् । उनी भन्छिन्, ‘भाइरल हुन आउने र निरन्तरता नदिने कारणले पनि लामो समय टिक्न सकेका छैनन् ।’